Tag: sahanka suuq geynta | Martech Zone
Tag: sahanka suuq geynta
Shalay, waxaan la wadaagay sida aan u duudduubnay sanad dhan oo ah cusbooneysiinta bulshada. In kasta oo xoogaa shaqo ah ay galeen cilmibaarista, kooxdayadu waxay dhowr saacadood ku qaadatay oo keliya in la duugo xogta oo laga dhigo feyl la soo rogi karo. Xitaa ka dib markaan ka gudubnay dhammaan hubinta ansaxinta, waxay ahayd inaan markaa gacanta ku dhex marno oo aan dooranno ama ku darno warbaahinta si aan ugu muujino cusbooneysiin kasta oo bulsheed. Waxay qaadatay dhowr saacadood si loo shaandheeyo
Suuqgeyntaadu ma waxay ka cabaneysaa kala-jajab, niyad jab iyo abaabul la'aan?
Arbacada, Oktoobar 8, 2014 Arbacada, Oktoobar 8, 2014 Douglas Karr
Waxaad u badan tahay inaad ku jawaabtay haa… kuwayaguna waa caqabad sidoo kale. Abaabul la'aan, kala qaybsanaanta iyo niyad jabku waa mawduucyada muhiimka ah ee ka dhasha natiijooyinka ka soo baxay Sahaminta Suuqgeynta iyo Teknolojiyada ee Kanaalka, oo ay sii daysay Signal (oo hore u ahaan jiray BrightTag). Natiijooyinka daraasaddu waxay muujinayaan xaqiiqda ah in suuqleydu aysan inta badan dareemin in tiknoolajiyadda xayeysiinta ay ka caawineyso inay ku guuleystaan ​​suuq geynta marinka marinka bilaa-xadka ah ee macaamiisha ay ka rajeynayaan maanta. Signal ayaa baaray sumadaha 281 iyo kuwa wakaaladda ka ganacsada,
Raadinta Muhiimka ah ee ku saabsan sida Suuqyayaashu u wanaajiyaan waxyaabaha bulshada ka kooban
Arbaco, Juun 9, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Talada softiweer waxay iskaashi la sameysay Adobe si loo sameeyo sahamintii ugu fiicneed ee ka soo baxda mawduucyada bulshada. Natiijooyinka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah: Inta badan suuqleyda (boqolkiiba 84) waxay si joogto ah ugu dhajiyaan ugu yaraan seddex shabakadaha warbaahinta bulshada, iyadoo boqolkiiba 70 ay dhajiyaan ugu yaraan hal mar maalintii. Suuqleyda ayaa inta badan soo qaatay adeegsiga waxyaabaha ku jira muuqaalka, hashtags iyo usernames oo ah xeelado muhiim ah oo lagu hagaajinayo waxyaabaha ku jira warbaahinta bulshada. In kabadan nus (boqolkiiba 57) waxay adeegsadaan aaladaha softiweerka si ay u maareeyaan dhajinta, jawaab bixiyaashaasina waxay la kulmeen dhib yar
Arbacada, February 19, 2014 Arbacada, February 19, 2014 Douglas Karr
Miyaad la yaabtay waxa kale ee suuqgeeyayaasha dijitaalka ahi ay ku guuleystaan ​​markay tahay xeeladaha suuq-geynta waxyaabaha, oo ay ku jiraan qorista, wax soo saarka, wadaagista, iyo cabirka? Iyada oo ay weheliso LookBook HQ, Oracle Eloqua ayaa sharaxaad ka bixisay sida suuqleyda dijitaalka ahi uga jawaabayaan dalabaadka istiraatiijiyadda nuxurka ee ku jira muuqaalkan. Waxaan raadineynay inaan ku ixtiraamno suuq geynta waxyaabaha leh aragti gaar ah oo ku saabsan kasbashada, lahaanshaha, iyo istaraatiijiyadaha warbaahineed ee la bixiyo - waxa ay siyaasadaha suuqyadu raacayaan-iyo sidoo kale sida waxyaabaha loo qoro safarka iibsadaha